Legende Saint-Emilion 2016 ~ ICT.com.mm
HomeLegende Saint-Emilion 2016
Legende Saint-Emilion 2016
Légende Saint-Émilion Cabernet Franc, Merlot Alcohol: 13.5% Dry/ 2016 Saint-Emilion/ France Tasting Notes Ruby red color with medium intensity on the rim. Intense and complex nose, with aromas of exotic sandalwoods and... [Learn more]
Ruby red color with medium intensity on the rim. Intense and complex nose, with aromas of exotic sandalwoods and cocoa powder. Elegant tannins with long aromatic finished.
Pair perfectly with grilled or roasted red meat such as lamb, beef on light pepper sauce. Blue cheese, mild and hard cheeses would beagreat pair as well to enjoy.
ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် Legende Saint-Emilion (2016) ဝိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ဝိုင်တွေ အများအပြားထွက်ရှိရာ အဓိကပြင်သစ်ဝိုင်မြို့လေးဖြစ်တဲ့ Saint-Émilion ကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Bordeaux Blend Red ရောစပ်နည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ မူလဝိုင်နီစပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Merlot စပျစ်နဲ့ အနက်ရောင်အခွံရှိ Cabernet Franc ပြင်သစ်ဝိုင်စပျစ်မျိုးတို့ကို ရောစပ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှု (၁၃.၅) ရာခိုင်နှုန်း ရှိတဲ့ Dry/ 2016 ဝိုင်နီ (Savory & Classic) အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ သိုးကလေးသားလို အနီရောင်အသားကင် သို့မဟုတ် အသားကြပ်တင်ဟင်းလျာ၊ ငရုတ်ကောင်းဆော့စ်ခပ်ပါးပါးနဲ့ စားသုံးရတဲ့အမဲသားဟင်းလျာတွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ပြင်သစ် ဝိုင်နီ ဖြစ်ပါတယ်။ Blue ချိစ်၊ နူးညံ့တဲ့ချိစ်နဲ့ ချိစ်အမာတို့ဖြင့်လည်း တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Produced by Domaines Barons de Rothschild (Lafite), Légende R Saint-Emilion is an harmonious blend of Merlot and Cabernet France. With its fruity, toasty bouquet, this elegant wine is round and well balanced on the palate :afine illustration of this prestigious appellation.